Soanierana : Telo lahy samy voatsatok’antsy -
AccueilSongandinaSoanierana : Telo lahy samy voatsatok’antsy
Soanierana : Telo lahy samy voatsatok’antsy
16/11/2018 admintriatra Songandina 0
Tsy tana ny ain’ilay lehilahy iray manodidina ny 19 taona voatsatok’antsy. Araka ny tati-baovao voaray, dia nisotrosotro niaraka tamin’ny namany tany anaty ”bar” izy no raikitra ny disadisa, niafara tamin’ny tsindron’antsy. Ny harivan’ny 01 novambra lasa teo no nitrangan’izany teny Sonierana. Raha ny nambaran’ny polisy eo anivon’ny sampandraharaha misahana ny ady heloka bevava, dia samy mamo izy ireo, ary nisy ny tsy fifankahazoana. “Raikitra ny fifandonana teo amin’ireo tovolahy maromaro, izay voalaza fa resa-bola no nitarika ny ady, ka nifandramatra nivoaka ny toeram-pisotroana izy ireo. Noraran’ny tompon- trano ihany koa izy ireo tsy hanakorontana tao an-toerana. Nitohy teny ivelan’ny trano fisotroana ny savorovoro, ka tsy fantatra mazava izay tena zava-niseho fa ireto farany efa naratra mafy voatsatok’antsy no nisy nahita. Olona teny amin’ny manodidina no voalaza fa nahita ireto farany efa samy nihosin-drà avokoa, izay nahitana dian’antsy maromaro teo amin’ny kibony. Mbola nentina teny amin’ny toeram-pitsaboana izy ireo taorian’ny fahavoazany, saingy tsy tana intsony ny ain’ny iray noho ny ratra nahazo azy.
Mpianatra iray voampanga
Tonga nanao fitsirihana ny razana teny amin’ny tranom-paty ny polisy taorian’izay. Nametraka fitoriana ihany koa ny fianakavian’ity niharam-boina. Nisy ny fikaroham-baovao nataon’ny avy eo anivon’ny polisy misahana ny ady heloka bevava, ka dimy mianadahy no nosamborina nanaovana fanadihadiana. 12 andro aty aoriana izany no voasambotry ny polisy ilay voampanga tamin’ny tsindron’antsy nahafatesana olona iray, ary nandratra ireo namany roa hafa ho nahavanona ny loza. Voalaza fa mbola mpianatra no voarohirohy ho tompon’antoka voalohany, ary nanohizana ny famotorana. Naseho teo anoloan’ny mpampanoa lalàna kosa izy taorian’ny fanadihadiana azy, izay tsy afa-bela fa nampidirina am-ponja eny Tsiafahy, taorian’ny nanolorana ny raharaha teny amin’ny fampanoavana. Any am-ponja, ary miandry indray ny fotoam-pitsarana azy izany ity tovolahy voalaza fa mbola mpianatra ity, noho ny habibiana vitany.